I-Kdenlive 20.08 ifika kunye nophuculo kuhlelo kunye nokulungisa i-316 bugs | Ubunlog
I-Kdenlive 20.08 ifika nophuculo kuhlelo kunye nokulungisa ngaphezulu kwe-300 bugs
Namhlanje, uLuntu lweKDE wenze ukwaziswa ngokusesikweni de Kdenlive 20.08, Umhleli wevidiyo weprojekthi eyinxalenye yefayile ye- Izicelo ze-20.08 ze KDE ezikhutshwe ngoLwesine odlulileyo. Olu luguqulelo lokuqala, oko kuthetha ukuba luza neempawu ezintsha ngaphaya kwezilungiso eziqhelekileyo ezibandakanyiweyo kuhlaziyo lwenqaku. Kwaye kukho into emileyo: iiprojekthi ezenziwe ngeKdenlive 20.08 aziyi kuhambelana neenguqulelo zangaphambili.
Kwaye i-Kdenlive 20.08 inomsebenzi omninzi wangaphakathi. Ke ngoko, abaphuhlisi bayo bagqibe kwelokuba ayihambelani neenguqulelo ezindala, kuba utshintsho lunokwenza ukuba iprojekthi ingasebenzi. Oku kuthetha ukuba i-v20.08 iya kuba nakho ukuvula iiprojekthi ukusuka kwi-v20.04 nangaphambili, kodwa ungaphindisi umva. Apha ngezantsi unoluhlu lweendaba ezibalaseleyo eziye zafika neKdenlive 20.08.
1 I-Kdenlive 20.08 Iimbalasane
2 Ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi yombhali nakwiFlathub
I-Kdenlive 20.08 Iimbalasane
Ukuphuculwa kokusebenza kokuveliswa kwezithombisi ezilalelwayo kunye nokulandelelana kokudlala kweJPG.
Umaleko omdibaniso omtsha, oya kuphucula ukuhlela, iaudiyo, iziphumo kunye nemibala.
Inkxaso yokuqala yokuphumeza ukuhamba phambili komsebenzi ukongeza inkxaso yokusasazwa kweevidiyo ezininzi.
Imivalo yokusondeza ingandiswa.
Islonda sekliphu ngoku siquka i-zoom bar, kwaye ukukhangela, ukudonsa i-interface kuphuculwe, umlawuli omtsha ufakiwe, kunye nobukhulu bokubaluleka buphuculwe.
Isinxibelelanisi esitsha solawulo lwe-cache kuseto esivumela ukuba sigcine kwaye silawule ubungakanani beefayile zakho ezigciniweyo kunye neefom, kunye nedatha yogcino. Sinokucoca idatha edala kunenani elithile leenyanga.
Iindlela ezimfutshane ezimfutshane:
El Isiporho (') ukuseta umsinga weaudiyo kwingoma ekujoliswe kuyo.
Shift + Alt njengenye indlela emfutshane yokuhambisa ikliphu nganye iye kwenye ingoma.
I-Alt + Imouse, kwiWindows, ukutshintsha umkhondo weqela lekliphu.
. + inombolo ukugxila kumkhondo wevidiyo.
Inombolo ye-Alt + Ukugxila kwiitraki zomsindo.
( uthatha ukuqala kwesiqwengana kwisikhombisi kumgca wexesha.
) uthatha isiphelo sekliphu kwisikhombisi kumgca wexesha.
Amanqaku eProjekthi-Kukuvumela ukuba wenze amakishayo kwiitampampampu kwaye unike iitampu zexesha kwiqhosha lomgqomo wangoku.
Ukongezwa kokhetho lokuhlala ubonisa iklip yokujonga ii-thumbnail ezingezantsi kwevidiyo endaweni yokugqume ngaphezulu.
Utshintsho oludibeneyo kunye neLumas.
Yongeza isenzo se "Gcina ikopi" ukugcina ikopi yeprojekthi.
Ukuphuculwa kwesikhongozeli seProjekthi: Yandisa / yeka zonke iifolda zecontainer ngeShift + cofa, khumbula imeko yeefolda (eyandisiweyo / eyaphukileyo) xa ugcina kunye nokunye ukulungiswa.
Yongeza useto lobude bekliphu kwidayalog yesantya.
I-Titler-Yongeza ukhetho lokugcina isihloko kwaye ungeze kwiprojekthi ngokudlula okukodwa (ngokudala imenyu yeqhosha).
Yongeza i-icon yommeleli kwizicatshulwa kumda wexesha.
Yandisa isisombululo sokubekwa kweliso kwesandi.
Amandla okutshintsha imibala yezithonjana ezimanyelwayo (Useto> Useto> Imibala).
Ithiywe ngokutsha ukusuka ku "Yongeza iSlideshow Clip" kuye "Yongeza ukulandelelana kwemifanekiso".
Igama leqhotyoshelweyo phezulu kwiwijethi yeePlip Properties livula isiphequluli sefayile kwindawo yekliphu.
IWindows: Sebenzisa iindlela ezixhaswayo xa ubeka ifolda kwisitya.
Ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi yombhali nakwiFlathub
Kdenlive 20.08 ngoku iyafumaneka isuka e Indawo yombhali yeLinux kunye neWindows. Abasebenzisi beLinux banayo ngoku Flathub, kodwa uguqulelo lwe-Snap, ukungafani, alukahlaziywa. Akunayo indawo yokugcina i-KDE Backports, into eya kuyenza kwiiyure okanye kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ngayiphi na imeko, sele sinenguqulo entsha yeKdenlive, kwaye ndiyathemba ukuba bazilungisile ezinye zeebugs ezazinohlobo lwangaphambili, kuba ngelixa kuyinyani ukuba ngumhleli wam endiwuthandayo, ikwangcono ukuba ayiphumelelanga kancinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-Kdenlive 20.08 ifika nophuculo kuhlelo kunye nokulungisa ngaphezulu kwe-300 bugs
IKdenlive… umhleli wevidiyo ukuchitha ixesha. Ukusuka kwimpazamo ukuya kwimpazamo. Balungisa ama-300 kwaye baphuma ngama-600 +.
ICinelerra ngumhleli wokwenyani.
Ndisancamathele kuguqulelo lwe-17, iinguqulelo ezintsha zisuse uninzi lweziphumo eziluncedo ezazinazo ezindala.
Imoodle, inkqubo yolawulo lokufunda ku-Ubuntu 20.04 LTS
I-Linux 5.9-rc1, uMgqatswa woKhululwa wokuqala wenguqulo elandelayo ye-kernel uqheleke ngakumbi kune-5.8